Raha sendra misy asa na olana iray, na manana toetra iray na zato ianao, dia mitsambikina amin'ilay asa ianao ary miezaka ny manavaka azy manokana - dia mamorona asa ho an'ny tenanao ianao, haingana dia haingana ianao hahatsiaro ho simba sy ho kivy.
Raha fantatrao ny zava-manahirana lehibe tsirairay sy ny asa tsirairay izay mitranga rehefa misy izy ireo, na miakatra raha azo atao, dia ario hoe iza no azonao atao mba hikarakarana azy amin'ny manaraka, na ahoana no ahafahanao mamorona rafitra hiatrehana azy isaky ny tonga Up - manangana orinasa ianao.
Raha niditra ny indostrian'ny trano mba hamorona ianao ny vola, ary mamorona ny fahalalahana takiana amin'ny fankasitrahana ny tombom-barotrao, dia mila mandrindra ny fizotran'ny asa tsirairay ianao, mandra-pahatonga anao hiasa tanteraka mba hahatonga anao ho very tanteraka. Tsy maintsy miatrika zavatra manokana na tetikasa manokana nofidinao hatao ianao.
Azonao atao ny manontany; "Ahoana raha tsy manana ny loharanom-pitaovana ny olona mba hiasa ho ahy?"
Ny olona izay miasa ho anao dia tsy voatery ho mpiasanao, fa ataonao fotsiny amin'ny tombontsoany ny manao anjara andraikitra ho anao ary tsy mila manao izany ianao. Ny olona dia miasa amin'ny komisiona, ny saram-panaovana, ny fampanantenana ny tombom-barotra amin'ny hoavy, amin'ny fiaraha-miasa ary indraindray satria tiany na hikarakara anao.
Misy ihany koa ny serivisy sy rindrambaiko an-tserasera izay azonao ampiasaina mba hamolavolana tetikasa maro, raha sahirana ny tetibolanao dia afaka mandoa isam-bolana ho an'ny maro amin'izy ireo.
Tsy ny vahoaka ihany no mila izany - ianao dia hanana ampaham-potoana betsaka amin'ny andronao amin'ny fikarakarana asa mahomby - mila mamorona fomba izay ahodin-drivotra ireo zavatra ireo ianao na manodina azy any amin'ny lisitry ny lisitra - Tsy maintsy mieritreritra an'ireny hetsika ireny isaky ny mahazatra izy ireo, ary ataovy mahazatra azy ireny.
Tokony ho afaka hanoratra ireo asa mahazatra, ny fiantombohana, ireo dingana manan-danja, ireo fanapahan-kevitra manan-danja ary ny teboka farany. Tokony ho afaka mamorona sarintany momba ny tsirairay amin'ireo asa mahazatra ireo ianao - Raha tsy afaka manoratra azy ianao dia handany fotoana betsaka amin'ny ho avy ary tsy ho zakanao mihitsy ny miasa.
Ny fijerena ireo fomba ireo dia manana tombontsoa lehibe amin'ny 3:
Azonao atao ny manaraka ny rafitra mampihena ny fotoana fisainanao
Azonao atao ny mamantatra mora foana ireo ampahany tsy misy dikany amin'ny rafitra
Azonao atao ny mamela ny asa an-tsitrapo (apetraho izany) rehefa tonga ny fotoana.
Ny tombontsoa lehibe faharoa amin'io fomba fiasa io dia ny fahafahanao mifantoka amin'ny fananganana ny orinasa, mifantoka amin'ny zavatra stratejika izay tena mitondra soa.
Mihevi-tena araka ny tokony ho izy, mandinika;
Ny ankamaroan'ny raharaham-barotra dia avy amin'ny rafitra mahantra na tsy misy.
Ireo rafitra dia mamela anao hahazo ny fototry ny olana ary manafoana azy ireo amin'ny loharanony.
Amin'ny famoronana vahaolana amin'ny rafitra, dia mampihena ny sakana amin'ny olana mitranga ianao.
Manamaivana ny adin-tsainao ianao satria tsy olana intsony ny olana eo amin'ny orinasa satria tampotampoka eo amin'ny rafitrao ianao.
Lasa mpandraharaha ara-tsaratsara kokoa ianao satria maharikoriko ny manakiana ny hafa azonao atao mba hifantohana amin'ny fanavaozana ny rafitra.
Amin'ny famoronana, fanatsarana sy fametrahana rafitra ao amin'ny orinasanao dia tokony hieritreritra amin'ny rafitra rafitra.
Raha mamorona rafitra voasoratra amin'ny zava-drehetra ataonao ao amin'ny orinasa ianao dia mora ny manome solontena satria afaka mahatakatra ny raharaham-barotra tahaka izany koa ny tsirairay.
Raha miorina amin'ny rafitra ny orinasa, dia mora ny manorina azy amin'ny fanavaozana ny rafitra hiatrehana raharaham-barotra bebe kokoa.
Ny zavatra rehetra andraikinao hatao ho toy ny fanaovana zavatra iray isaky ny mandeha dia PROJECT, tokony ho tetikasa miavaka miaraka amin'ny tanjona mazava (s), manomboka, ny fikarohana, ny dingana fampiharana ary ny famaritana ny lalao farany.
TANJONA ANTOKA - Ataovy izay hahaizanao mifehy ny asa aman-draharahanao amin'ny fananana ary ahoana no ahazoanao fanampiana avy amin'ny olona sy fikambanana hafa.